Ikhaya > Isengezo Esihle se-Nootropic se-Alpha GPC ngo-2021
Ngokubona kwethu, isithasiselo esihle kakhulu se-nootropic I-Alpha GPC ngo-2021 ukuze uzisebenzisele yona yi- Cofttek I-Alpha GPC. Into enhle ngalesi sengezo ukuthi ingumkhiqizo wemifino / i-vegan ngakho-ke, wonke umuntu angayithatha. Okubaluleke kakhulu, isengezo asiqukethe ukolweni, i-gluten, ubisi, iqanda, inhlanzi namantongomane. Ngakho-ke, ibuye ilungele ukusetshenziswa kwabantu abanezifo zomzimba. Kodwa-ke, uma unemibandela ekhona, kufanele ukhulume nodokotela wakho kuqala. Lokhu ukwengeza ithole izibuyekezo ezinhle kuphela futhi yenza ngqo lokho ithi ikwenza.
Ingabe i-Alpha GPC ilungele ini?
I-Alpha GPC ukuphathwa kwandisa ukukhishwa kwe-neurotransmitter acetylcholine futhi kusiza ukufunda nokukhumbula. Kubasubathi, ukwesekwa kwe-Alpha GPC kuvimbela ukuncipha kokuvivinya umzimba emazingeni e-choline, kwandisa ukusebenza kokukhuthazela nokuvalwa kwe-hormone yokukhula.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-Alpha GPC isebenze?
I-Alpha GPC iyasebenza ekwandiseni ukukhiqizwa kwamandla omzimba aphansi ngemuva kwezinsuku eziyi-6 zokulekelelwa. Abaqeqeshi bokusebenza kwezemidlalo bangacabanga ukungeza i-Alpha GPC ekudleni kwabagijimi nabasubathi bamandla ukukhulisa ukusebenza kwemisipha.
Ngabe i-Alpha GPC ikwenza ukhathele?
Kuyakwenza ukhathale ngokwengeziwe ebusuku, kepha lokhu kunengqondo ngenxa yomsebenzi osezingeni eliphakeme owenziwe ingqondo yakho emini. Futhi-ke, udinga ukulala ukuze uvumele ingqondo yakho icubungule ngokuphelele izinkumbulo ozenze usuku lonke.
Ngabe ubuchopho be-Alpha bunemiphumela engemihle?
Imiphumela emibi ye-Alpha Brain ayivamile kakhulu. Ngokuya ngesilingo somtholampilo we-Alpha Brain nobufakazi, awukho umbiko ngemiphumela emibi yesengezo.
Ungaba ne-choline eningi kakhulu?
Ukuthola i-choline eningi kakhulu kungadala iphunga lomzimba oyinhlanzi, ukuhlanza, ukujuluka okusindayo nokuncipha kwamathe, umfutho ophansi wegazi nokonakala kwesibindi. Olunye ucwaningo luphakamisa nokuthi inani eliphakeme le-choline lingakhuphula ubungozi besifo senhliziyo.
Ngingathatha i-Alpha GPC ne-CDP choline ndawonye?
Lezi zithasiselo ezimbili ze-choline zisebenza kahle ngokubambisana. … I-Alpha GPC ingumkhiqizo we-phosphatidylcholine (PC). Futhi i-CDP Choline eyengeziwe ihlinzeka nge-uridine edingekayo ekuhlanganisweni kwe-PC. Ngakho-ke uma uhlanganisiwe, unikeza ubuchopho bakho uhlobo lwe-choline oludingayo phansi ezingeni lamaselula.
Ingabe i-Alpha GPC ingokwemvelo?
I-Alpha GPC iyimolekyuli eyenzeka ngokwemvelo ehlala ebuchosheni. Lesi sakhi somzimba esibalulekile, esihlobene kakhulu nomndeni wamavithamini B, sihlala ngqo ngaphakathi kwama-cell membrane ulwelwesi.
Ingabe i-Alpha brain iphephile?
I-Alpha Brain ingenye ephephe kunazo zonke ama-nootropic supplements. Kodwa-ke, ungahle ube nemiphumela emibi ethile ngokuya ngokusebenzisana nomuthi noma lapho udla okungaphezulu kokudingekayo. Yingakho kufanele unamathele kumthamo onconyiwe futhi kufanele uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha noma isiphi isengezo se-nootropic
Ihlala isikhathi esingakanani imiphumela ye-Alpha brain?
I-Alpha Brain ihlala ngaphezu kwamahora we-6. Ngokuya kokunye ukubuyekeza okuzimele ku-Alpha Brain, imiphumela ingahlala ngaphezu kwamahora angu-7-8.
Ingabe i-Alpha brain iyasebenza ngempela?
Ukusetshenziswa kobuchopho be-Alpha amasonto ayisithupha-6 kuthuthukise kakhulu inkumbulo yamazwi yakamuva nomsebenzi omkhulu uma kuqhathaniswa nezilawuli, eqenjini labantu abadala abanempilo abaneminyaka eyi-18-35. Imiphumela yalolu cwaningo ifanelwe ukuqhubeka nokufundwa ekusetshenzisweni kokuthuthuka kwengqondo Izithako ekusebenzeni kwezemidlalo.
Ngabe uJoe Rogan ungumnikazi we-Alpha brain?
UJoe Rogan uhlangene nenkampani ebizwa nge-Onnit, edala i-Alpha Brain, umkhiqizo ohloselwe ukuthuthukisa ukukhumbula ngamazwi nokuqedwa komsebenzi. I-Alpha Brain nayo ingenye yemikhiqizo embalwa emakethe enezilingo zokwelashwa kanti uRogan ukholelwa ukuthi kuyamsiza ukuthi akhumbule amagama nemisho kangcono kune-placebo.
Ingabe i-Alpha brain isemthethweni?
Ephawula ngalesi simo, umsunguli we-Onnit Aubrey Marcus uthe: “Singasho ngokusobala ukuthi awekho ama-amphetamine noma ezinye izinto ezivinjelwe ebuchosheni be-Alpha. Sivivinya ngokukhetha yonke inqwaba yobuchopho be-Alpha ngezindleko zethu ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ayinazo izinto ezivinjelwe noma ezingekho emthethweni.
Yini ibhekwa enhle kakhulu yeNootropic?
I-Alpha GPC iyinhlanganisela ye-choline ekhona ngokwemvelo etholakala ebuchosheni. Le nhlanganisela nayo iyakhishwa lapho i-acid enamafutha etholakala kusoya nezinye izitshalo iphuka. Yize i-Alpha GPC ikhona ngokwemvelo, ekugxileni kwayo nobuningi bayo, akwanele ukwenza imisebenzi eyenzelwe ukuyisekela. Ngakho-ke, I-Alpha GPC ivame ukunikezwa ukusetshenziswa ngendlela yezithasiselo zokudla eziqukethe i-Alpha GPC ekhiqizwa ngokusebenzisa ikhemikhali noma i-enzymatic deacylation ye-phosphatidylcholine-ecebile i-soya phospholipids.
Ucwaningo olwenziwe ku-Alpha GPC kule minyaka edlule lusungule njengesandulela se-parasympathomimetic acetylcholine eshukumisa uhlelo lwezinzwa lwe-parasympathetic ngakho-ke, lusiza ekwelapheni izinhlobo zokuwohloka komqondo ze-Alzheimer's. I-Alpha GPC futhi iyisisetshenziswa esisebenza kahle kakhulu se-choline futhi ngenxa yalokho, izithasiselo eziqukethe le nhlanganisela zisebenza njengomthombo we-choline yokudla. I-Choline yisakhi esibalulekile esidingeka emzimbeni ukuze yenze imisebenzi eminingana ebalulekile, njengokukhula kwamaselula kanye ne-metabolism. I-Alpha GPC futhi iyi-nootropic esebenzayo ethuthukisa ukusebenza kwengqondo kwengqondo. Ngakho-ke kuvame ukunikezwa iziguli esezikhulile ezihlangabezana nokwehla kwengqondo. Ukudla kwe-Alpha GPC kungakhuphula nokukhiqizwa kwehomoni yokukhula emzimbeni futhi ngenxa yalokho, abasubathi abasemsebenzini basebenzisa izengezo ze-Alpha GPC ukukhulisa amandla abo aphelele.
Yikuphi ukwesekwa okungcono kakhulu kobuchopho?
Izengezo ze-Alpha GPC ziletha nezinzuzo ezimbalwa ezingaba khona. Okokuqala, i-Alpha GPC yaziwa ngokuthuthukisa impilo nokusebenza kobuchopho. Ikwenza lokhu ngokwandisa amazinga e-dopamine nomzimba. Ucwaningo oluningi luye lwaxhumanisa le nhlanganisela nomsebenzi othuthukisiwe wememori kanye nekhono lokufunda. Kwezinye izimo ezithile, izengezo ze-alpha GPC zikwazile ukubuyisa inkumbulo yize amacala anjalo akude futhi ambalwa. Ngaphandle kokuthuthukisa imisebenzi yobuchopho neyokuqonda, kunobufakazi obanele bokufakazela ukuthi i-Alpha GPC ingasetshenziswa ukwelapha i-Alzheimer's, izinhlobo ezahlukahlukene zokuwohloka komqondo, nokuhlaselwa yischemic okudlulayo. Le nhlanganisela isetshenziswa futhi ngabasubathi njengoba ithuthukisa ukusebenza kwabo. Ekuphetheni, i-alpha GPC inezinzuzo eziningana ezisunguliwe, isici esibalulekile esingeze ekuthandeni kwayo eminyakeni yamuva.
Ngabe i-Alpha GPC iyayinyusa i-HGH?
I-Alpha GPC iyisandulela sokubeka i-acetylcholine esingahle sandise uketshezi lwe-hormone yokukhula ngokusebenzisa isenzo se-catecholamine evuselelwe i-acetylcholine.
Ingabe i-choline ibangela ukudangala?
Asitholanga ubudlelwane obubalulekile ekuhlaziyweni okuhambisanayo kobudlelwano phakathi kwe-plasma choline nezimpawu zokudangala. Kulolu cwaningo olukhulu olususelwa enanini labantu, ukugxila kwe-choline bekuhlotshaniswa kabi nezimpawu zokukhathazeka kepha hhayi nezimpawu zokudangala.
Yini equkethe ubuchopho be-Alpha?
I-Alpha Brain inezithako ezimbili ezithuthukisa amazinga e-acetylcholine: i-GPC choline, umzimba oguqula ibe yi-acetylcholine, ne-Huperzine A, i-alkaloid etholakala ku-Chinese club moss, eyaziwa nangokuthi i-Huperzia serrata.
Ingabe i-CDP choline iphephile?
I-CDP choline isidakamizwa esiphephile, njengoba ukuhlolwa kobuthi kukhombisile; ayinayo imiphumela emibi ohlelweni lwe-cholinergic futhi ibekezeleleke ngokuphelele.
Iyini imiphumela yeNoopept?
Imiphumela emibi engaba khona ye-noopept ifaka ukuphazamiseka kokulala (iziguli eziyi-5/31), ukucasulwa (3/31), nokukhuphuka kwengcindezi yegazi (7/31) (Neznamov neTeleshova, 2009). Izindlela zokwenziwa kocwaningo lwangaphambi kocwaningo Ucwaningo olwenziwe kumagundane lubike ukuthi i-noopept yeqe isithiyo sobuchopho begazi.
Ngabe i-Alpha GPC iyayinyusa i-dopamine?
Kungenzeka i-Alpha GPC ithuthukise ukwakheka kwememori futhi ithuthukise ikhono lokufunda. I-Alpha GPC nayo ingakhuphula amazinga e-dopamine, azuzisa ukusebenza kobuchopho kakhulu.
Isebenza ngokushesha kangakanani i-Alpha GPC?
I-Alpha GPC iyasebenza ekwandiseni ukukhiqizwa kwamandla omzimba aphansi ngemuva kwezinsuku eziyi-6 zokungezelela. Abaqeqeshi bokusebenza kwezemidlalo bangacabanga ukungeza i-Alpha GPC ekudleni kwabagijimi nabasubathi bamandla ukukhulisa ukusebenza kwemisipha.
Ziyini izimpawu zokushoda kwe-choline?
Ukuzizwa ukhathazekile noma ungenakho ukuphumula.
Isibindi esinamafutha, okunye okwaziwa ngokuthi yisifo esingesona isidakwa esinamafutha (i-NAFLD)
I-necrosis yezinso ezinesifo sokopha.
Ingabe i-choline ilungele ukukhathazeka?
I-Choline ingakhulisa ukusebenza kwememori, ithuthukise ukukhula kobuchopho futhi yelaphe ukukhathazeka nokunye ukuphazamiseka kwengqondo.
Uyini umthombo omuhle kakhulu we-choline?
Imithombo yokudla ecebe kakhulu ye-choline yinyama, inhlanzi, ubisi, namaqanda. Izithelo eziningi, imifino, nezinhlamvu eziphelele ziqukethe i-choline futhi, ngakho-ke kunezinto eziningi ongakhetha kuzo abantu abadla imifino noma izitshalo.
Ngingayithola kanjani i-choline ngokwemvelo?
Amavithamini amaningi awaqukethe i-choline.
Yize ukudla okune-choline-isibindi, izikhupha zamaqanda, nenyama ebomvu-kuvame ukuba ngaphezulu emafutheni agcwele, i-choline ingatholakala nokudla okuphansi emafutheni ashubile afaka i-salmon, i-cod, i-tilapia, isifuba senkukhu, nemidumba.
Ukuhlola kanjani ukushoda kwe-choline?
Njengamanje, akukho sivivinyo somtholampilo esichazayo esingasetshenziswa ukukhomba abantu abangenayo i-choline. Ukugxilwa kwe-Plasma choline, i-betaine, ne-phosphatidylcholine kwehle kubantu bondliwe ukudla okungenayo i-choline, kepha bawa amathafa ngemuva kokuwa ngama-30% -50%.
Ngabe ukunambitha kwe-Alpha GPC kunjani?
It has a flavour sweet kancane kuwo okungabonakala kuphela ngobuqili. Akuyona neze into esikhundleni sikashukela yabo bonke abantu.
Ingabe ama-choline supplements ayasebenza?
Izifundo ezinkulu zokubuka zixhuma ukudla kwe-choline namazinga egazi ekusebenzeni kobuchopho okuthuthukisiwe, kufaka phakathi inkumbulo engcono nokusebenza. Ukwengeza nge I-1,000 mg ngosuku kwaholela ekwandisweni kwenkumbulo yesikhashana neyesikhathi eside kubantu abadala abaneminyaka engama-50-85 ababenenkumbulo embi.
Ingabe i-citicoline iyefana ne-choline?
I-Citicoline yigama lesithako senkomfa efana ncamashi ne-cytidine-diphosphocholine (i-CDP choline). Umehluko kuphela ukuthi i-CDP choline yenzeka ngokwemvelo kubantu, kanti i-citicoline iyifomu elitholakala kwizithasiselo zokudla okunempilo.
Ingabe i-citicoline iyayinyusa i-dopamine?
I-Citicoline ithuthukisa ukuxhumana kwamaselula ngokwandisa ukutholakala kwama-neurotransmitters, kufaka phakathi i-acetylcholine, norepinephrine, ne-dopamine. Ngamagama alula, ingxenye ye-choline ye-citicoline isetshenziselwa ukudala i-acetylcholine, eyi-primary executive neurotransmitter ebuchosheni bomuntu.
Uyini umehluko phakathi kwe-choline ne-phosphatidylcholine?
I-Phosphatidylcholine ikhemikhali eliqukethwe amaqanda, ubhontshisi wesoyi, lwesinaphi, ujongilanga nokunye ukudla. Igama elithi "phosphatidylcholine" kwesinye isikhathi lisetshenziswa ngokungafani nelithi "lecithin," yize lokhu kungafani. I-Choline iyingxenye ye-phosphatidylcholine, okuyingxenye ye-lecithin.
Ingabe i-choline ibangela ukukhathazeka?
Kulolu cwaningo olukhulu olususelwa kubantu, ukugxila kwe-choline bekuhlotshaniswa kabi nezimpawu zokukhathazeka kepha hhayi nezimpawu zokudangala.
Ingabe i-choline inyusa i-serotonin?
Izinguquko emazingeni e-plasma we-choline noma wama-amino acid athile aholela ekuguqulweni kwamazinga obuchopho bezandulela zala ma-neurotransmitters-i-choline ye-acetylcholine, i-tryptophan ye-serotonin, ne-tyrosine yama-catecholamines.
Yini imiphumela emibi ye-choline?
iphunga lomzimba elinenhlanzi.
Ingabe i-choline ikunikeza amandla?
Kubikwa ukuthi i-choline idlala indima ebalulekile ekuguqulweni kwamafutha; iphula amanoni ukuze asetshenziswe njengomthombo wamandla. Lesi senzo se-choline sisenza sibaluleke ekuvikeleni izimo ezifana nesibindi esinamafutha noma amafutha amaningi egazini.
Ngabe iLecithin ilungele ukukhathazeka?
I-Lecithin isetshenziswa ekwelapheni ukuphazamiseka kwememori okunjengokuwohloka komqondo kanye nesifo i-Alzheimer's. Iphinde isetshenziselwe ekwelapheni isifo se-gallbladder, isifo sesibindi, izinhlobo ezithile zokucindezelwa, cholesterol ephezulu, ukukhathazeka nesifo sesikhumba esibizwa nge-eczema.
Yini imiphumela emibi ye-Alpha GPC?
Kungadala imiphumela emibi kwabanye abantu kufaka phakathi isilungulela, ikhanda, isizungu nokuqubuka kwesikhumba. Uma unikezwa njengesibhamu: I-Alpha GPC INGABE IPHEPHELELE uma isetshenziswe ngokufanele. Kungadala imiphumela emibi kwabanye abantu kufaka phakathi isilungulela, ikhanda elibuhlungu, ukuqwasha, ukudideka nokubomvu endaweni yokujova.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza i-Alpha GPC?
Ngabe amanzi we-Alpha GPC noma amafutha ancibilikile?
Izinhlobo ezivame kakhulu ekudleni yi-phosphatidylcholine (PC), i-phosphocholine, i-alpha-gpc, i-sphingomyelin, i-CDP-choline, ne-choline yamahhala. I-Phospholine, i-choline yamahhala, ne-alpha-gpc ziyancibilika emanzini, kuyilapho i-phosphatidylcholine ne-sphingomyelin zinokuncibilika okunamafutha.
Ngabe ubuchopho be-Alpha buphephile ukusetshenziswa?
I-Alpha Brain ingesinye sezithako ze-nootropic eziphephe kakhulu. Kodwa-ke, ungahle ube nemiphumela emibi ethile ngokuya ngokusebenzisana nomuthi noma lapho udla okungaphezulu kokudingekayo. Yingakho kufanele unamathele kumthamo onconyiwe futhi kufanele uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha noma isiphi isengezo se-nootropic.
Ingabe ubuchopho buxhasa umsebenzi?
Zonke izifundo ezenziwayo zokuhlaziya imiphumela ehlukile ye-Alpha GPC emisebenzini ehlukahlukene yomzimba ziyavuma ngazwi linye ukuthi i-complex, lapho isetshenziswa ngaphansi kwemikhawulo yayo yansuku zonke, iphephile ngokuphelele. Kodwa-ke, ukuphuza ngokweqile kwe-Alpha GPC kungaholela emiphumeleni emibi, enjengekhanda, ukushisa kwenhliziyo, ukuqwasha nesiyezi. Okubaluleke kakhulu, abesifazane abakhulelwe nabancelisa amabele akufanele badle leli khompiyutha ngoba akukho cwaningo olwenziwe kuze kube manje lokufunda umphumela we-Alpha GPC kwabesifazane abakhulelwe. Ngokufanayo, uma unesimo esivele sikhona, kungcono ukubonisana nodokotela wakho ngaphambi kokuqala nganoma yisiphi isengezo se-Alpha GPC.
Ngabe i-Nootropics ingadala ikhanda?
Kepha kunemiphumela emibi engaba khona, efaka ikhanda, ukukhathazeka nokuqwasha.
Ingabe i-choline eningi kakhulu ingaba yingozi?
Ungathatha i-Alpha GPC nsuku zonke?
Lapho ithathwa ngemithamo enconywayo i-Alpha GPC ibekezeleleka kahle. Kubantu abadala abaningi isilinganiso somthamo owamukelekayo sibanzi; isilinganiso sansuku zonke esiqoqekayo se-300-1200 mg, lapho sithathwa kumthamo owodwa noma emibili, siphephile futhi sisebenza kahle.
Ngabe amaNootropics aphephile?
Ukusetshenziswa kabi kwama-nootropics — noma iyiphi into engaguqula, ithuthukise, noma yengeze ukusebenza kokuqonda, ikakhulukazi ngokugqugquzela noma ukuvimbela ama-neurotransmitters athile — angaba yingozi futhi ahlasele ebuchosheni bomuntu, nakwabanye abantu abanomlando wokusetshenziswa kwengqondo noma kwezidakamizwa Izinkinga kungenzeka.
Yiliphi iphilisi lobuchopho elihamba phambili emakethe?
Eminyakeni embalwa edlule, abantu baqale ukunaka kakhulu imizimba yabo. Ingxoxo ezungeze impilo yobuchopho iye yaqina kakhulu njengoba ubuchopho busebenza njengesikhungo sokulawula umzimba wonke futhi noma ikuphi ukungasebenzi kahle ebuchosheni kungaholela emiphumeleni emibi. UCholine ubamba iqhaza elibalulekile ekugcineni impilo yobuchopho nokwenza ngcono ukusebenza kobuchopho. Ngakho-ke, izithasiselo eziningi zokudla manje zifaka izinhlanganisela ezinikeza i-choline emzimbeni. Enye yezinhlanganisela ezinjalo yi-Alpha GPC.
Ingabe Ikhofi LiyiNootropic?
Ikhofi libhekwa njenge-nootropic ngoba liqukethe i-caffeine. I-caffeine iyi-nootropic ethandwayo eyenza ngcono ukuqapha kanye nemizwelo. AmaNootropics, abuye abizwe kabanzi ngokuthi "izidakamizwa ezihlakaniphile" asiza ukuthuthukisa imisebenzi yokuqonda, ithuthukisa inkumbulo nokusebenza kobuchopho.
Yimaphi amaNootropics asebenza ngempela?
Ucwaningo olwenziwe ukuqonda umphumela we i-alpha GPC kokukhishwa kwamandla kuveze ukuthi umthamo ka-600 mg ubangela ukwanda kokucasha kwe-hormone yokukhula. Ngakho-ke, umthamo ojwayelekile we-alpha GPC uvame ukuba phakathi kuka-300 kuye ku-600 mg futhi abagijimi bayelulekwa ukuthi banamathele kumkhawulo ongaphezulu.
Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngokwelapha ukwehla kokuqonda, cishe zonke izifundo ezihlaziye umphumela we-Alpha GPC ekusebenzeni kwengqondo zisebenzise isilinganiso esijwayelekile se-1200 mg ngosuku, sehlukaniswe ngemithamo emithathu ka-400 mg. Ukwehla kwalesi silinganiso somthamo kungenzeka kungabi nomphumela ofanayo nomthamo we-1200 mg ngosuku. Ngakho-ke, iziguli eziphethwe yi-Alzheimer's, dementia, kanye ne-TIA zivame ukwelulekwa ukuthi zinamathele kumthamo we-1200mg / wosuku.
Ingabe i-CBD iyi-Nootropic?
Ngenxa yezinhlobonhlobo zayo zezinzuzo zezempilo ezinengqondo, i-CBD ibhekwa njenge-nootropic. Abaphenyi abaningi banentshisekelo mayelana nekhono le-CBD lokusiza ngezinselele ezivamile zengqondo ezinjengokukhathazeka, ukudangala, kanye nengcindezi.
Ziyini Izinzuzo ze-Alpha GPC?
① Kuyasebenza ekwelapheni i-Alzheimer's Disese
Eminyakeni edlule kwenziwe izifundo eziningana ukutadisha ikhono lale nhlanganisela ukusiza ekwelapheni i-Alzheimer's. Olunye lolu cwaningo lwembula ukuthi i-Alpha GPC ithuthukisa izinga le-acetylcholine ebuchosheni. I-Acetylcholine ixhunyaniswe nokusebenza kwengqondo okuthuthukisiwe kanye nokuqonda okuthuthukisiwe. Okubaluleke kakhulu, ucwaningo luphinde lwembula ukuthi kubantu abane-hypertension, i-Alpha GPC yehlise ukuvuvukala okuzungeze imithambo yegazi ebuchosheni, ngaleyo ndlela iholele ekusebenzeni kwengqondo okuthuthukile.
Ucwaningo lukhombisile nokuthi iziguli ezinesifo i-Alzheimer's zingazuza ngokuthatha i-1200 mg ye-alpha GPC nsuku zonke. Lokhu kukalwa kunconyelwa isikhathi sezinyanga ezi-3 kuye kwezi-6 futhi kuthuthukisa kakhulu amakhono okucabanga abantu abaphethwe yilesi sifo esibulalayo.
② Kuyasiza Ngokulashwa Komqondo Wokuwohloka Komqondo
Abantu abaningi badideka phakathi kokuwohloka komqondo kanye ne-Alzheimers. Ngakho-ke, kubalulekile ukusungula umehluko phakathi kwalezi ezimbili zokuqala. I-Dementia yigama elijwayelekile elisetshenziselwa ukuchaza ukwehla kwekhono lomuntu lokucabanga kuze kube yilapho ukwehla kuqala ukuphazamisa imisebenzi yomuntu yansuku zonke. I-Alzheimer's is not dementia kepha isifo esithile esingesinye sezimbangela ezivame kakhulu zokuwohloka komqondo.
Kuyo yonke le minyaka, kwenziwa izifundo eziningana ukucwaninga umphumela wokudla kwe-alpha GPC ezigulini zokwehla kwengqondo. Olunye ucwaningo luveze ukuthi ukudla njalo kwe-alpha GPC ngaphezu kwezinyanga eziyisithupha kwenze ngcono ukuqonda futhi kusebenza ezigulini ezinokuwohloka komqondo okulinganiselayo. Ngokufanayo, olunye ucwaningo luxhumanise ukusetshenziswa kwe-alpha GPC ejwayelekile nokuqonda okuthuthukile ezigulini ezinesifo sokuwohloka komqondo nesifo se-cerebrovascular isifo. Ekuphetheni, abantu abanenkinga yokuwohloka komqondo bangazuza kakhulu ngokuthatha i-1000 mg ye-Alpha GPC ngomthamo wosuku. Ezigulini ezinjalo, ukungena kwe-Alpha GPC kuhlangene nokuziphatha okuthuthukile, imizwa nokuqonda.
③ Isetshenziselwa Ukwelapha Ukuhlaselwa Kwesikhashana Kwe-Ischemic
Ukuhlaselwa kwesikhashana kwe-ischemic (TIA) kuyiziqephu ezimfushane zokungasebenzi kahle kwemizwa, okuvame ukubangelwa ukuphazamiseka ekunikezelweni kwegazi ebuchosheni nasweni. Ukuhlaselwa kwesikhashana kwe-ischemic kuvame ukuhlala imizuzu embalwa kepha kubonakale njengokwandulelwa yisifo sohlangothi. Kwenziwe ucwaningo lokufunda ngomphumela we-Alpha GPC ngokushaywa unhlangothi neziguli ze-TIA. Ucwaningo luveze ukuthi abantu abathathe isibhamu esingu-1200-mg Alpha GPC nsuku zonke izinsuku ezingama-28, balandelwa yi-1200 mg / ngosuku lwe-Alpha GPC (ngezinyathelo zomlomo) izinyanga eziyisithupha, bakhombisa amakhono okucabanga okungcono kanye nokuvuselelwa okungcono kwe-TIA .
④ Kwenza Isengezo Esiphumelelayo se-Nootropic
I-Acetylcholine ikhemikhali ye-organic esebenza njengeherotransmitter futhi ibalulekile kwimemori nokufunda imisebenzi. I-Alpha GPC inyusa la makhemikhali ngaphakathi kobuchopho, ngaleyo ndlela kuholele enkumbulweni ethuthukisiwe nasekuqondeni. Ngakho-ke, i-alpha GPC isetshenziswa kaningi njengengxenye ebalulekile kwezithasiselo zokudla ze-nootropic.
⑤ Kuthuthukisa Ukusebenza Kwemidlalo
Kumajaha, ukungena kwe-alpha GPC kuhlangene nokunciphiswa okubangelwa ukuzivivinya ku-choline. Okubaluleke kakhulu, ibuye ihlanganiswe nokukhiqizwa okukhulayo kwama-hormone nokukhulisa ukusebenza kahle kokukhuthazela. Ngakho-ke, abaqeqeshi nabaqeqeshi bavame ukweluleka abasubathi ukuthi basebenzise i-alpha GPC ukufeza ukusebenza kahle kwemisipha.
(1). I-US National Library of Medicine National Institute of Health, Gatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca E., 1992 Sep; 30 (9): 331-5.
(2). UDoggrell SA no-Evans S; U-Evans (Okthoba 2003). "Ukwelashwa kokuwohloka komqondo nge-modulation ye-neurotransmission". Umbono Ongoti Uphenya Izidakamizwa. 12 (10): 1633-1654.
(3). UParnetti, uLucilla; et al. (2007). "Isandulela se-Cholinergic ekwelapheni ukukhubazeka kwengqondo: Izindlela ezingasebenzi noma isidingo sokuhlolwa kabusha?". Ijenali yeSayensi Yezinzwa. 257 (1–2): 264–9.
(4). Uhambo lokuhlola i-egt.
(5). I-Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yemilingo yempilo yakho.
(6). I-Anandamide vs cbd: yikuphi okungcono empilweni yakho? Konke odinga ukukwazi ngabo!
(7). Konke odinga ukukwazi mayelana ne-nicotinamide riboside chloride.
(8). Izithasiselo ze-Magnesium l-threonate: izinzuzo, isilinganiso, nemiphumela emibi.
(9). I-Palmitoylethanolamide (ipea): izinzuzo, isilinganiso, ukusetshenziswa, ukwengeza.
(10). Izinzuzo eziphezulu zezempilo eziyi-6 zezengezo ze-resveratrol.
(11). Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(12). Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13). Isengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga se-nicotinamide mononucleotide (nmn).
I-Alpha-gpc ngokuqinisekile ingenye yama-nootropics amahle kakhulu kimi. Ngisebenzisa i-150mg ngezinsuku ngifuna ukukhuliswa kobuchopho.
Engangimangaza kakhulu ukukwazi ukukhulisa ukusebenza kwezemidlalo nokululama kahle. Njengomdlali we-basketball, ngokweqiniso yi-PED ngokuqinisekile. Uzizwa ulawula umzimba wakho kakhulu nokuthi uhamba kanjani, ukunyakaza okuhle kwemisipha nokuxhumana kuyanda kakhulu.
Ngithatha kuphela i-300mg manje. Uyithathe izinyanga ezi-2 iqondile. Akukho ukucindezeleka. Amandla nje ejimu.
Ngithatha ama-300mg ekuseni nsuku zonke. Ngangizithola ngicindezeleka kancane ngemuva kwamasonto athile eminyakeni embalwa yokuqala, ngakho-ke ngangithatha ikhefu izinsuku ezimbalwa. Manje lapho ngithatha ikhefu futhi ngibuya kukho, kungishaya ngamandla futhi ngithola amaphupho afanelekayo ubusuku obubodwa noma ezimbili. Hhayi ubuthongo obukhulu. Akuyona into engiyithandayo. Ingixazulule inkinga engisayiphila impilo yami yonke ebangelwa yinkungu yengqondo kimi. Manje sengigxile kakhulu futhi ngiphapheme emphakathini, futhi nginamandla amaningi ngokomzimba. Ngiyabazi bonke abanye abathi bacindezelekile kuyo - futhi ngiyavuma ukuthi ukudangala okukhulu kwe-choline kuyinto embi kakhulu emhlabeni futhi kuzolonakalisa usuku lwakho. Ngakho-ke uma kukhona ofunda lokhu futhi ecabanga ukukuzama, qala ngomthamo ophansi kunayo yonke, mhlawumbe ngisho nangolunye usuku noma isikhathi eside, bese unaka ukuthi uzizwa kanjani.
Kimi kusebenza kahle. Ngokweqiniso bengingalindele okuningi kodwa njalo lapho ngiyithatha ngizizwa ngigxile kakhulu futhi nginenkumbulo eyengeziwe.
Ngifunda kakhulu ngakho imiphumela ibonakale kakhulu kimi. Ngithatha u-150-300 mg.